Mety efa nandre momba ny sakafo ketogenika? Amin'ny ankapobeny dia sakafo nipoitra ho an'ny fitsaboana ny androbe izy io, amin'ny ankapobeny dia be matavy, antonony amin'ny proteinina ary ambany gliosida, mamela ny fandoroana ny tavy amin'ny atiny ka miteraka vatana ketône sasany ao amin'ny ra.
Ireo vatana ketone vokarina ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana ketosis, izay zava-dehibe amin'ny fitsaboana ny epileptika.
Ny ketosis be loatra ao amin'ny vatana dia mety miteraka fatiantoka kely amin'ny hozatra, izay azo antoka fa tsy ny tanjon'ny olona sasany amin'ny ankamaroan'ny fotoana, sa tsy izany?
Ka anio dia hanazava eto aminao ny fisalasalana lehibe mifandraika amin'ny sakafo ketogène.
Ahoana no nahatonga ny sakafo ketogène?
Ny sakafo ketogène dia tsy anisan'ireo sakafo mahagaga izay ahitanao sakafo vonona handeha ary tena zava-dehibe ny hahatakaranao izany.
Izy io dia noforonina tamin'ny taona 80 mba hitsaboana ny ankizy sy ny tanora voan'ny androbe, kajy tena henjana, mifototra amin'ny haavony, ny lanjany ary ny taonan'ny olona handeha amin'ny fitsaboana.
Ny ankizy izay natolotra ny sakafo ketogène dia nila nampidirina hopitaly ary nifady hanina avy amin'ny karazan-tsakafo mafy sy ranoka hatramin'ny 36 ora, 36 ora, alaivo sary an-tsaina ianao amin'ity toe-javatra ity? Ka any ivelany dia efa hitanao fa sarotra lavitra noho ny eritreretinao.
Taorian’ny fifadian-kanina dia natomboka tamin’ireto zaza ireto ny sakafo, saingy araka ny kajikajy natao tany am-boalohany, ny 90%-n’ny filana isan’andro dia avy amin’ny tavy.
Tsy milaza aho hoe tokony handeha any amin'ny hopitaly ianao mba hanao diet ketogène, mba hanairana ny saina ihany no apetrako ity vaovao ity ary satria fantatro fa ny fahalianan'ny olona maro momba ilay lohahevitra.
Fa maninona no io fomba fihinana io no ampiasaina betsaka amin'ny vahoaka mitady hypertrophy?
Izay ilay fanontaniana tsy te hampangina! Ary tsy latsaka. Maro ireo mandeha manao gym amin’izao fotoana izao no mitady an’io karazana régime io, tsy ny fanaovana gym ihany fa ny fanatanjahan-tena be kaloria ihany koa.
Mety efa naheno ianao fa rehefa te hampihena lanja isika dia "tokony handany kaloria kely kokoa noho izay lanintsika" sa tsy izany? Tena misy izany vaovao izany, ary tsy misy isalasalana izany.
Miaraka amin'ny sakafo ketogène dia hanao izany ianao, mandany kaloria kely kokoa ary mamela ny vatanao handany izay efa voatahiry amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ka ny vatanao dia handoro tavy tsy ilaina.
Saingy tsy ny zava-drehetra dia tsotra tahaka ny hita, rehefa miditra amin'ny ketosis ianao dia ny vatantsika koa dia mitady angovo ao anaty proteinina, izay tena ilaina amin'ny fivoaran'ny hozatra, ka rehefa manomboka ny sakafo ianao dia handoro tavy, fa azonao atao. very faobe.hozatra.
Koa alohan'ny hivoahana sy hanombohana ity régime ity dia ilaina ny miresaka tsara amin'ny mpitsabo ara-pahasalamanao mba hahafahany manoro anao amin'ny tsara indrindra tokony hatao.
Ahoana no fiasan'ny sakafo ketogenika?
Raha hanomboka sakafo ketogène ianao dia mila mahafantatra fa ny karazana gliosida toy ny mofo, mofomamy, paty, vary, sôkôla, sns dia hesorina amin'ny sakafonao.
Marihina fa na ny koba manontolo na maivana amin'ireo sakafo ireo dia tsy azo atao, amin'ny voalohany dia toa ratsy izany, saingy manome antoka aho fa mendrika ny fahafoizan-tena, ary rehefa mandeha ny fotoana dia tsy hanahy ianao satria tsy afaka. mihinàna horonana amin'ny sakafo maraina.
Saingy misy ny varotra, tsy afaka mihinana gliosida ianao, fa ny sakafo ketogène dia mamela ny karazana sakafo rehetra mifototra amin'ny tavy sy proteinina dia lany, ary koa ny fromazy, misy tsara kokoa noho ny kafe misy fromazy? Na iza na iza avy any Minas dia hahatakatra tsara ahy.
Noho izany dia maimaim-poana ny sakafo toy ny hena mena, saumon ary karazana trondro, atody, fromazy, akoho, voankazo ary legioma.
Diet ketogène ho an'ny hypertrophy: sakafo tokony hohalavirina
Ny voamaina mifototra amin'ny (katsaka, vary, varimbazaha sy ny hafa), sakafo misy varimbazaha na lafarinina katsaka (mofo, mofomamy, biscuit, ankoatry ny hafa), tubers (ovy, ovy, ovy, manga) dia voarara amin'ny sakafo ketogène. ), voamaina (tsaramaso, voanjo, voanjo, voanemba sy ny hafa) sy ny karazana siramamy, na sucrose, glucose, lactose na fructose.
Ny fihinanana legioma (voatabia, letisia, laisoa, baranjely, tongolo, okra, kôkômbra, broccoli, jilo, sns), hena mena, fromazy, trondro, akoho, hena, atody, henan-kisoa ary zava-pisotro dia maimaim-poana tanteraka. misy gliosida amin'ny firafiny.
Tsara ny mahatsiaro fa tsy tokony hivoaka mihinana an'ireo sakafo rehetra ireo ary tsy misy torolalana, ity sakafo ity araka ny voalazako tetsy ambony dia tsy maintsy kajy tsara sy voatokana ho an'ny olona tsirairay, ka alohan'ny hiaingana dia maneho hevitra momba izay rehetra azon'ny sakafo aho dia manoro hevitra. ny nutritionist anao ary jereo koa ny heviny momba ilay lohahevitra ok.
Ary avy eo tianao ve ny lahatsoratra momba ny Diet Ketogenic ho an'ny Hypertrophy? Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa!